Izikhala zokupaka Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Izikhala zokupaka in Benidorm
ukubuka Izikhala zokupaka eshicilelwe 4 days ago
ukubuka Izikhala zokupaka eshicilelwe 1 week ago
ukubuka Izikhala zokupaka eshicilelwe 3 months ago
ukubuka Izikhala zokupaka eshicilelwe 4 months ago
Isikhala sokupaka yindawo eyenzelwe ukupaka, kungaba ibhalwe noma ibhalwe. Izikhala zokupaka zingaba egaraji lokupaka, endaweni yokupaka izimoto noma emgwaqweni wedolobha. Imvamisa isikhala esiyindawo yomgwaqo. Imoto ifanela ngaphakathi kwesikhala, kungaba yokupaka parallel, yokupaka perpendicular noma yokupaka angled. Kuya ngendawo yokupaka indawo, kungaba nemithetho ephathelene nesikhathi esivunyelwe ukupaka nemali ekhokhwayo yokusebenzisa indawo yokupaka. Lapho ukufunwa kwezikhala okuphuma kuzona izimoto zingahle zigcwalise ipaki eceleni komgwaqo, izigceme zotshani nezinye izindawo ezazingakhelwanga injongo.